काहाँबाट अायाे बन अधिकृतस‌ंग दुई कराेड ? – YesKathmandu.com
काहाँबाट अायाे बन अधिकृतस‌ंग दुई कराेड ?
काठमाण्डाै । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवकाश प्राप्त सहायक वन अधिकृत विनोदकुमार सिंहविरुद्ध अनाधिकृतरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार आरोपी सिंहको तीन करोड ५१ लाख ८२ हजार ६४४ बराबरको सम्पत्तिमध्ये एक करोड ६० लाख २१ हजार १८ वैध देखिएको छ । सरकारी सेवामा रहँदा आरोपी सिंहको एक करोड ९१ लाख ६१ हजार ६२५ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएको आयोगले दाबी गरेको छ ।
वन अधिकृत सिंहले २०४३ साल फागुन १३ गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरी केही समय पहिले मात्रै अवकाश लिएका थिए । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आफन्तका नाममा राखेको तथा कुनै पनि तथ्य र प्रमाणबाटसमेत पुष्टि नभएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिएका छन् ।